LIGIN’NY BAOLINA KITRA ANALANJIROFO : Voafidy i Ramaroson Jacques
Tontosa ny zoma 15 desambra lasa teo ny fifidianana izay ho filohan’ny ligin’ny baolina kitra Analanjirofo. 18 décembre 2017
Fifidianana izay notanterahina tao amin’ny Hotely Itendro Fenoarivo-Atsinanana. Miisa efatra ireo kandidà ka anisan’izany ny filohan’ny ligy amin’izao fotoana izao, Ramaroson Jacques. Tonga nandray anjara tamin’ny fifidianana ireo filohan’ny seksiona enina mandrafitra ny ligin’Analanjirofo. Mazava ny fandresena ho an-dRa maroson Jacques. Vato 6 amin’ny 6 no azony.
Izany hoe sekisiona 6 amin’ny enina. Voafidy fanindroany ho filohan’ny ligin’Analanjirofo arak’izany ny tenany. Izy, izay sady filohan’ny fikambanamben’ny ligy 22 eto Madagasikara. Fampiakarana ny lentan’ny baolina kitra ao Analanjiorofo no fanamby. Ny filohan’ny ligin’ny baolina kitra Analanjirofo, izay maotera mampihodina ity taranja ity noho ireo fanampiana entiny ho fanatsarana hatrany izany baolina kitra ao Analanjirofo izany.
Ho an’ny ligin’Atsinanana indray dia mbola voafidy fanindroany i Andry Marcel Herinjatovo. Tontosa ny zoma 15 desambra ny fifidianana. Fifidianana izay nisy fihodinana faharoa. Nahatratra efatra ireo kandidà nirotsaka hofidiana ka ny roa nahazo vato be indrindra no niroso tamin’ny fihodinana faharoa, dia i Andry Marcel Herinjatovo sy Dinh-Van Randriamanampisoa Seraphin. Inefatra natao ny fihodinana faharoa noho ireo isam-bato nitovy sy fisian’ny vato fotsy iray. Mpifidy izay miisa dimy. Tamin’ny fahaefatra vao nivoaka ho mpandresy i Andry Marcel Herinjatovo. Fandresena tamin’ny isam-bato telo tamin’ireo mpifidy miisa dimy.
Ho an’ny ligin’ Alaotra-Mangoro, dia fantatra fa nivoaka mpandresy ihany koa ny filohan’ny ligy amperin’asa, Romuald. Ho an’ireo ligy ao anatin’ny faritra telo mandritra ny faritanin’i Toamasina izany, dia ireo filohan’ny ligy amperin’asa avokoa no voafidy nandritra ny fifidianana notanterahin,a ny zoma 15 desambra teo.
« Asaivo manamboatra saina dieny izao Ravalomanana » VOKA-PIFIDIANANA FIHODINANA FAHAROA (360) 4 décembre 2018 Niverin-dàlana nampihorohoro SIDINA AN’HABAKABAKA TSARADIA (347) 5 décembre 2018 Tsy nisy mpiraharaha sy nakorain’ny olona ny karnavalin’ny kandidà N° 25 FAMPIELEZAN-KEVITRA ANY ANTSIRANANA (301) 5 décembre 2018 Nanao hetsika ny Holafitry ny mpisolovava HABIBIANA NIHATRA TAMIN’NY MAITRE IALY (265) 4 décembre 2018 Naiditra am-ponja vonjimaika ny roalahy HABIBIANA TAMINA MPISOLOVAVA TETSY ANTANIMENA (134) 5 décembre 2018 Mitombo isa hatrany ireo vahoaka resy lahatra amin’ny filoha Rajoelina FIHODINANA FAHAROA (117) 6 décembre 2018